अनौठो संसार | Indrenionline.com | Page 5
सेक्स प्राकृतिक पक्ष हो र यो अपरिहार्य छ । एक अर्कामा समन्वय, समझदारी र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा गरिएको सेक्सले मानिसको जीवनमा सकारात्मक असर पुर्याउँदछ । पार्टनरको भावना बुझेर र तरिका मिलाएर गरिएको सेक्सले बढि आनन्द दिने गर्दछ तर, सही समय नआई चालिएको कदमले पुरै ‘सेक्स मुड’ नै बिगार्न सक्दछ । ‘सेक्स मुड’ नबिग्रियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ, भने यी कुराहरु नगर्नुहोस्ः १- किस नगर्नेः ...
जहाँ बिवाह भएको तीन दिनसम्म दुलाहा दुलहीलाई शौचालय जान दिइदैन
एजेन्सी । इन्डोनेशियाको एउटा जातीमा अनौठो खालको परम्परा रहेको छ । उनीहरु बिवाह गरेका दुलाहा दुलहीलाई बिवाह पश्चात तीन दिनसम्म शौचालय जान दिँदैनन । इन्डोनेशियाको टिडान्ग जातीमा अहिलेसम्म पनि यो संस्कार व्याप्त रहेको छ । यदि विवाह गरेको दुलाहा दुलही तीन दिनभित्रै शौचालय गएमा उनीहरुको सम्वन्ध लामो समय टिक्दैन भन्ने मान्यताले जरो गाडेको छ । साथै यदि दुलाहा दुलहीले शौचालय ...
हेर्नुहोस परपुरुष सँग सल्किनेको नालीबेली
वैवाहिक जिवनमा निरासा तथा बेमेलको कुरा नौलो होइन, विश्वव्यापी सनातन सत्य हो । तर लोग्नेस्वास्नीको झगडा परालको आगो भनेझैँ धेरै दम्पतिको हकमा यस्तो झगडा छिटै सामसुम भैहाल्छ अनि हठात् अँगालोमा बाँधिन्छन् लोग्नेस्वास्नी । लोग्ने स्वास्नी भएपछि सम्भोग भन्ने कुरा सामान्य हो र वैवाहिक जिवनको लागि एक अनिवार्य शर्त जस्तै हो । तर जापानमा भने आधाजसो दम्पतिले सहबास नगर्ने गरेको अनौठो ...
सम्पत्तिलाई प्राथमिकता दिनु हुँदैन, किनकी सेक्स गर्नका लागि तपाइँलाई निकै सानो ठाउँ भए पुग्छ ।’यो भनाइ कुनै उरण्ठेउलो तन्नेरीले बन्द कोठाभित्रबाट निकालेको आवाज होइन । सिंगापुरकी एक वरिष्ठ मन्त्रीको भनाइ हो । जनसंख्या मामिला मन्त्री जोसेफिन तियोले विवाह तथा बच्चाको विषयमा सरकारी मिडियालार्य दिएको अन्तरवार्तामा यस्तो बताएकी हुन् । सिंगापुरका नयाँ पुस्ताका युवायुवतीहरुले आफ्नो घर नभएकै कारण बच्चा जन्माउन मन ...
तपाइको आँखाको उमेर कति होला ?
तपाइँ कति वर्ष उमेरको हुनुभयो हँ ? अनि तपाइँको आँखा कति वर्षको भयो ? सहज उत्तर आफु जति वर्षको भइयो आँखा पनि उत्ति वर्षको नै भयो । तर होइन, तपाइको उमेर कलिलै भएपनि आँखा भने निकै पूरानो हो । तपाइँ हामी सबैको आँखाको उमेर ५० करोड वर्षको भैसक्यो । वैज्ञानिकहरुका अनुसार जिवजन्तुको आँखा ५० करोड वर्ष पुरानो हो । वैज्ञानिकहरुले ...
रुखभित्रै चिहान, जहाँ रुखको काण्डमा अन्त्येष्टि गरिन्छ बच्चाको लास
मानिसहरु आ आफ्नो संस्कार अनुसार मृत्युपछि लासलाई जलाउने वा गाड्ने गर्छन् । गाड्नु भनेको जमिनमा खाल्डो खनेर लासलाई पुर्नु हो । तर इण्डोनेसियामा एउटा यस्तो प्रचलन छ जहाँ बच्चा मरिसकेपछि उसको लासलाई जमिनमा गाडिँदैन रुखभित्र प्वाल पारेर राखिन्छ । इण्डोनेसियाको राजधानीभन्दा १८६ मिटर टाढा पर्ने ताना तरोजा नामक पहाडि क्षेत्रका बासिन्दाहरु मृतक बच्चाको लास जमिनमा गाड्दैनन्, रुखको काण्डमा राखिदिन्छन् । ...
महिलाको कुन अंगमा पर्छ पुरुषको पहिलो नजर ?
कुनै सुन्दर युवतीलाई देख्दा पुरुषको पहिलो नजर युवतीको कुन अंगमा पर्ला रु पहिलोपटक कुनै महिलालाई भेट्दा पुरुषले झ्वाट्ट कुन अंगमा नजर डुलाउला रु धेरैको उत्तर हुनसक्छ वक्षस्थल । तर एक अध्ययनले भने यो कुरा झुटो सावित गरिदिएको छ । एक अन्तराष्ट्रिय सर्भेक्षणबाट प्राप्त नतिजालाई विश्वास गर्ने हो भने पुरुषको पहिलो नजर महिलाको आँखामा पर्दछ । पहिलो नजर महिलाको आँखामा जुधाइसकेपछि ...
यी युवतीले गरिन १ लाख पुरुषसँग ओछ्यान तताउने घोषणा
उद्देश्य के लिनु रु उडि छुनु चन्द्र एक भन्ने गरिन्छ हामीकहाँ । तर पोल्याण्डकी एक युवतीले भने उडेर चन्द्रमा छुने भन्दा पनि अझै कडा जस्तो लाग्ने उद्धेश्य लिएकी छिन् । २१ वर्षकी ती युवतीले आफ्नो जिवनकालमा १ लाख जना पुरुषसँग ओछ्यान तताउने लक्ष्य लिएकी छिन् । उनले आफ्नो यो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि काम सुरुवात गरिसकेकी छिन् र अहिलेसम्म केही ...
जनताले सम्भोग नगर्दा सरकारलाई चिन्ता
हामीकहाँ जनताहरु उद्यमशील भएनन्, यौनहिंसामा वृद्धि भयो तथा दुर्गम ठाउँहरुमा जनसंख्याको वृद्धिदर पनि बढि भयो भनेर सरकारलाई चिन्ता हुँदो हो । तर जापानमा भने जनताले सेक्सप्रति रुचि नराख्दा सरकारको टाउको दुखेको छ । उसै त जापानीहरु निकै मेहेनती तथा काममा डुब्ने मानिसको रुपमा चिनिन्छन् । पछिल्लो समय जापानीहरु काममा यति डुब्न थालेछन् की उनीहरुमा सेक्सप्रतिको रुचि नै घटिरहेको छ र ...
रहस्यमय घुम्ने द्वीप
अर्जेन्टिनाको उत्तरी भागमा एउटा अनौठो र रहस्मय द्वीप भेटिएको छ। यसको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको यो द्वीप आफ्नै आधार रेखामा तैरिएर चक्कर लगाउँछ। यस रहस्यमय द्वीपको नाम ुद आइु राखिएको छ । यस द्वीपको खोज एक फिल्म निर्माताले गरेका हुन् । फिल्म निर्माता आफ्नो साइन्स(फिक्सन फिल्मका लागि उचित स्थानको खोजीमा निस्केन क्रममा यो द्वीप भेटिएको हो । निर्देशक सर्गियो न्युसपिलरका ...